ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပြဿနာ များဖြေရှင်းကြရာတွင် ~ Myanmar Express
9 June 2012 14:23
အဲ့ကောင်မက အဲ့ ကုလားကို ဘာလုပ်နေတာ .. ကုန်းချင်နေပြန်ပီး ထင်တယ်
9 June 2012 14:24
မေမေစုကလဲ ဒုတ်ကြောင်တာ ပေါ်တင်ကြီးးးးးးးး
ပေါ် တင် ပဲ ဟေ့ ကောင် အိုင် ပီ လိုက် ရုံ မ က လို့ မင်း ပါ သာလီး လေးးးးးးးး ပဲ လိုက် လိုက် စောက် ရူးးးးးးးးးးးမအေ လိုးးးးးး
Good suggestion! The only unbiased suggestion I have found on the net.
9 June 2012 19:09
NLD ၏ ယခု ကြေညာချက်သည် အားရကျေနပ်ဖွယ်ရာမရှိဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘူးသီးတောင်မောင်တောရှိ ဒေသခံပြည်သူများကိုယ်စား ယူဆပါသည်။ တိုင်းတပါးမှ ၀င်ရောက်လာသူများ ဆက်နွယ်နေသော အမျိုးသားရေးပြဿနာကို သာမန် ပြည်တွင်းက နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ဘာသာရေးနွယ်သော အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုဟု ယူဆဖော်ပြခြင်းသည် ပြဿနာ၏ အတိမ်အနက်ကိုေ၀၀ါးစေကာ NLD ကို ထောက်ခံခဲ့သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ယုံကြည်မှုကို ကျဆင်းစေပါသည်.။နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တစ်ခုဟုသော သံသယကြောင့် ပြတ်သားသောထုတ်ပြန်မှုများေ၀၀ါးနေခြင်းသည် ယခုအချိန်တွင် မဖြစ်သင့်တော့ဟု ယူဆပါသည်..။ မနှစ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ မေးခဲ့ကြသည်။ ..ယခင်ကတည်းက အတိုက်အခံများအားလုံးမှ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာအားအားဆန့်ကျင်ကာ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပြတ်သားစွာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့လျှင် ယခုကိစ္စသည် မည်သူပဲဖန်တီးပါစေ အရာရောက်မည်မဟုတ်ပေ..။ မီဒီယာများကလည်း ထိန်ချန်မည်မဟုတ်သလို ဘင်္ဂလီသည် အလိုလျောက် ပါဝါကျ သွားနိုင်ပါသည်..။ အခုတော့ အချိန် နှောင်းသလောက်ရှိနေပေပြီ...။ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာများကို ပြည်တွင်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအဖြစ် ထင်မှတ်ကာ စစ်တပ်နှင့် ရဲတို့မှ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းနေသော သနားစရာသတ္တ၀ါတစ်ကောင်ဟု မမြင်မိပါစေနှင့်ဟု ၀ိုင်းဝန်းဆုတောင်းကြရုံသာရှိတော့သည်..။
သက် ကြီး ပေ မဲ့ အ မေ မ ပျက် စီး သေး ပါ ဘူး..ကုန်း လို့ကောင်း ပါ သေး တယ်.. ကုန်း ချင် တာ မှ နီ ဂ ရိုး ဒုတ် ကြီး ဆို ရင် ပို ကြိုက် သေး.
ပစ်စမ်းဘာ။ ဆီးရီးယားမှာ အာဆတ်က မွတ်စလင်မ်ခွေးမျိုးတွေကို ဘယ်လိုသတ်နေသလဲတွေ့ တယ်မှတ်လား။ ဘာမှ စိုးရိမ်အနေနဲ့ ၊ ပစ်သာ ကြစမ်းဘာ၊ မြန်မာပြည်သူတွေ က မြန်မာ့တပ်မတော် က မွတ်စလင်မ်တွေ ကို မျိုးတုန်းသွားအောင်ပစ်တာ ကို ကြည့်ချင်နေပီ
Myanmar Express ကို မိုက် မိုက် ရိုင်း ရိုင်း ဆဲ ဆို နေ တဲ့ ကောင် တွေ က သ နား စ ရာ တွေ ပါ လား...အ ကျိုး သင့် အ ကြောင်း သင့် ဝေ ဖန် သုံး သပ် ပိုင် ခွင့် တောင် မ ရှိ ရ တော့ ဘူး လား.. အ ဖွား ကြီး ချောက် ထဲ ဆင်း ရင် တောင် လိုက် ဆင်း မယ့် ကောင် တွေ ပဲ ဖြစ် မယ်..အ နာ ဂတ် အ တွက် ရင် လေး မိ ရ တယ် ဗျာ..လူ ပိန်း ကြိုက် မြှောက် ပေး တဲ့ သ တင်း ဆောင်း ဆို ရင် တော့ Myanmar Express ကို သူ တို့ညီ မ သား ချင်း တွေ ကို တောင် ချ ပေး ကြ မယ် ထင် ပါ တယ်.
9 June 2012 21:18
9 June 2012 23:41
Above article is incorrect based on the history of Muslim were living in Bagan Myanmar Area since Bagan History. There is no document in Bagan Myanmar's History Muslim were living together with Bagan people, why you want to fool the Myanmar people to confuse? King Pyinya was the builder of the present-day Bagan City Wall, King Pyinbya was 34th king of dynasty, who in 874 A.D. transferred the capital from Tampawaddy. Bagan Thiripyiysaya built by Thelegyaung the 7th king and Paukkan built by Thamudrit, the founder of dynasty in 108A.D. Muhammed was born in Mecca around 570A.D., the Islam-Muslim started in 600A.D. in Arabian peninsula.The History of Bagan region started in 108A.D., much earlier century than Muhammed-Islam was born.There was no Muslim in started Bagan History, all Bagan people were Buddhists. Don't mention Muslim were mixing with Bagan Buddhists, don't tear apart Bagan History. Bagan is the most important respectable Historic Buddhist region in the world.
10 June 2012 00:35
10 June 2012 00:37
hello Mrs. Suu Kyi do yo wnnna marry again and again. You fucking bitch assholes.
10 June 2012 18:36
သားတို့ရေ.. ရရင်တော့လဲ ယူချင်တာပေါ့ again and again ပဲပေါ့ သားရယ်
ငါလို ဘာမဟုပ်﻿တဲ့လူ﻿တောင်﻿ ကလားသတင်း﻿တွေကျားရရင်﻿ အသားတုန်﻿﻿အောင်﻿ နာကျင်﻿ တာ ﻿ခွေးသားကလား﻿တွေကို﻿တော်﻿လ်ှန်﻿ဖို ငါထက်﻿မျိုးချစ်﻿သူ﻿တွေရှိပါတယ်﻿ အ﻿ရေးကျုံလာရင်﻿ အသက်﻿﻿ပေး﻿တော်﻿လှန်﻿မယ်﻿သူရှိပါတယ်﻿ ငါ ပါ အစ ﻿ပေါ့ ﻿သေ ﻿လောက်﻿﻿အောင်﻿မုန်းတယ်﻿ PostaComment
တောင်ငူ တက္ကသိုလ် ၀န်ထမ်းများက ပညာရေး ၀န်ကြီးကို မျက်နာ မလိုက်စေလို ( ပေးစာ)
တောင်ငူ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်သည် ၀န်းကြီးဌာန က ချပေးသော ကားပြင်ဆင် စရိတ်များကို ကားအား လုံးကို မပြင်ဆင်ပဲ ကားအချို့ကိုသာ ပြင်ဆ...
သိမ်းဆည်းမြေ ပြန်ရအောင် လုပ်ပေးမည်ဟု ပြောပြီး ငွေတောင်းခံသည့် NLD ၏ ဒီလှိုင်း ဂျာနယ် သတင်းထောက်
သိမ်းယူထားသည့် မြေယာများအား ပြန်လည် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ပြောပြီး ဒီလှိုင်း ဂျာနယ် သ တင်းထောက် ဆိုသူမှ ငွေကျပ် (၁၄) သိန်း တောင်းခံရယူသွား ခဲ့သည့် ...